Nigranee | » कलेज पढ्ने युवतीको गोजीमा भेटिए क’न्डम ! कलेज पढ्ने युवतीको गोजीमा भेटिए क’न्डम ! – Nigranee
कलेज पढ्ने युवतीको गोजीमा भेटिए क’न्डम !
१२ कक्षामा पढ्ने छोराछोरीको यौ न सम्बन्धका कारण भारतीय अभिभावक अत्याधिक समस्यामा पर्नेको एक अनुसन्धानले खुलासा गरेको छ । उनीहरूलाई यौ नको विषयमा शिक्षा नदिएकै कारण यो समस्या भोग्नु परेको सो अध्यानले देखाएको हो ।
यौ नका विषयमा शिक्षा नदिएकै कारण ७५ प्रतिशत किशोरीले ११ देखि १२ कक्षाको पढाइकै क्रममा यौ न सम्बन्ध कायम राख्ने गरेको पनि अध्ययनका क्रममा खुलेको छ । ‘करीव ७५ प्रतिश्त युवतीले स्कुलमा पढ्दाकै अवस्थामा यौ न सम्बन्ध राख्ने गरेका छन्,’ अध्ययनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्कुलमा पढ्ने उमेरमा यौ न सम्बन्ध राख्दा यौ नको लत अत्याधिक हुने गर्छ ।’
उचित यौ न शिक्षा नदिने हो भने यौ न सम्बन्धको लतले विकराल अवस्था ल्याउने पनि उक्त अनुसन्धानले सुझाएको छ । यौ न सम्बन्धको लत बढ्दै गएका युवतीलाई यौ न सम्बन्ध कायम नगर्दासम्म सन्तुष्टि नमिल्ने र यो मानसिक समस्याको रूपमा बाहिर आउने अनुसन्धानमा बताइएको छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनका अनुसार महानगरहरूमा बसेर पढ्ने तथा हुर्केका युवती ३८ घण्टा फजुल काममा व्यस्त हुने गरेका छन् । त्यसमा च्याटिङ्ग, ब्राउजिङ्ग, फोनमा कुराकानी, एसएमएस, र क्सी पिउने र से क्स सम्बन्ध कायम गर्ने नै उनीहरुको दिनचार्य रहेका छन् ।
त्यस्तै भारतीय सञ्चारम माध्यमहरूले जनाएअनुसार भारतमा कक्षा १२ मा पढ्ने किशोरीले हमेसा गोजीमा क ण्डम लिएर हिड्ने गर्छन् । जुनसुकै बेला यौ न सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने भएकाले क ण्डम बोक्नु परेको त्यस्ता युवतीहरुको प्रतिक्रिया छ ।
महानगरहरुमा युवती र युवाहरुमा मल्टिपल डेटिङको कन्सेप्ट पनि बढी रहेको छ । एउटै समयमा एकभन्दा बढी ब्वायफ्रेण्ड र गर्लफ्रेण्ड बनाउने युवा युवतीको कार्यबाट अभिभावकहरु चिन्तित छन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमले यौ नसम्बन्धी शिक्षा भारतका लागि अनिर्वाय भई सकेको जनाएका छन् । उनीहरुले कुनै पनि व्यक्तिलाई यौ न सम्बन्ध राख्ने खुबै चाहन हुने गरेको छ भने जीवनयापनमा सुधार अनिवार्य रहेको जनाएका छन् ।
से क्स सम्बन्धि फिल्म, चित्र हेर्न खुब मन पर्छ भने त्यसलाई केही कम गर्नै पर्ने समाचारमा जनाईएको छ । यौ न सम्बन्ध राख्ने लत बढेपछि किशोरीलाई इन्टरनेटमा अत्याधिक मोह हुने गरेको जनाइएको छ । उनीहरुले इन्टरनेटमा ना ङ्गा तस्वीर हुर्ने, टेलिफोनमा से क्सका कुरा गर्ने, पोर्न फिल्म हेर्ने गरेका छन् ।
यही कारण ४० प्रतिश्त युवतीहरु अचानक गर्भवती हुने गरेका छन् । यसले धेरै समस्या जन्माएका पनि छन् । यौ न लतकै कारण ७० प्रतिश्त वैवाहिक जीवन पनि बिग्रने गरेको पनि उक्त अनुसन्धनले खुलासा गरेको छ ।